Ornagai Dictionary Hits Version 1.4 | My Burmese Blog
Ornagai Dictionary Hits Version 1.4	On August 18, 2010	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- App	Ornagai iPhone App ရဲ့ Version 1.4 ကို ဒီနေ့ iTunes App Store မှာ update လုပ်လို့ရပါပြီ။ အခု version မှာ Search Box ပျောက်ပျောက် သွားတတ်တဲ့ ပြသနာကို ရှင်းပေးထားပါတယ်။ iPad Support လုပ်ထားပါတယ်။ Search Box ပျောက်သွားတဲ့ အခါ ပြန်ထွက်ပြီး ပြန်ဝင်လဲ ဆက်ပျောက်နေတတ်တာက Multi-Tasking က last state ကို save မှတ်ထားပေးလို့ပါ။
အခု version auto suggestion လဲပိတ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတာမို့ typing မြန်ပြီး processor မကောင်းတဲ့ ကျွန်တော့် 3G အတွက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ရိုက်ပြီးသွားတာတောင် display မှာ slow motion နဲ့ တက်နေတတ်လို့။ Version 1.4 bug fix update ကို အခုပြောခဲ့တဲ့ ပြသနာတွေရှင်းချင်ရင် update လုပ်လို့ရပါပြီ။ To Ornagai Give Away Winners ~ Ornagai Give Away Promo Code သုံးမရတဲ့ Winner များ ခင်ဗျား Promo Code များက US Store only သာသုံးလို့ရတယ်လို့ ကိုစေတန် ပြောပါတယ် ဒါကြောင့် လက်ရှိ Store ကနေ US Store ကို ခဏပြောင်းချင်ရင် iTunes အောက်ဆုံးက အလံပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ခဏပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်။ ပြီးရင် သုံးလို့ရပါပြီ။ Thanks
App, iPhone	4 Comments	saturngod
1.4 မှာ font embed အလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ iPad version ပါရအောင် လုပ်လိုက်တာ info.plist က နည်းနည်း ဂဂျောင်သွားပြီး font embed မလုပ်တော့ဘူး။ အခုပြင်ထားတဲ့ version 1.4.1 ကို update တင်ထားပါတယ်။
Excellent job! I just bought your Ornagai app for Symbian and Iphone. Looking forward to your new work!
Like or Dislike:00	Ko Ngwe
ornagai ကို iphone4 မှာ ၀ယ်သုံးတာ Eng=Myan ဘဲရတယ်
Myan=Eng မရတာ ဘာဖြစ်တာလဲ?
Like or Dislike:00	Kyawswar Nyein
The post has been removed on my blog! sorry!